China Handpainted Ceramic Kushongedza Art Tile fekitori uye vagadziri | YANJIN
Saizi: 11x14inch (28x35cm)
Kurema: 1.54kg / pc
1. Fine zvedongo tile
2. Masikisi mazhinji, akasiyana magadzirirwo
3. Hunhu hwakanaka, mutengo wemakwikwi
4. MOQ: 50pcs imwe dhizaini
5. Nguva yekutungamira: 35days
6. OEM inogamuchirwa
Iwo mifananidzo yakapendwa nemaoko pamataira nepenzura nyoro uye wozopendwa nemaoko zvobva zvaburitswa patembiricha yepamusoro kwazvo kuti uve nechokwadi chemhando yepamusoro uye yakanyatsogadzirwa uye kupenya muvara kupfuura mashini.
Zvigadzirwa zvedu zvinounza husingaenzanisike runako uye chimiro kumatunhu enzvimbo uye hofisi nzvimbo yekugadzira hupenyu hwakawedzera kunaka. Nezvigadzirwa zveFashoni, iwe unowana mazano uye kurudziro yekubatsira kushongedza uye kunakidza zvine hungiso.
Vatengi zvigadzirwa zvinogamuchirwa.
Ruoko rwakapendwa zvedongo pikicha / mataira ndeye ceramic handicraft.
Maitiro ekugadzira ndeepurojekiti-yemubhadharo purojekiti ine yakadzika yehunyanzvi uye tekinoroji zvinhu.
Main kugadzirwa maitiro
Iri Ruoko rakapendwa zvedongo pikicha / tile ndeyaChinese folk art ine nhoroondo inopfuura chiuru nemazana mashanu emakore
Yaishandiswa sekushongedza imba semadziro akarembera. Icho chipo chakanakisa kana chiyeuchidzo futi.
FOB chiteshi: Tianjin, Shanghai
Lead nguva: anenge 30days
Kavha: furo tireyi, yemukati chipo bhokisi, rakaomarara katoni, nhovo…
2) Kubhadhara Mitemo: 30-100% dhipoziti, TT, West Union, isingachinjiki L / C kana kutaurirana.
Isu tine anopfuura makore gumi nemapfumbamwe ehunyanzvi ruzivo semugadziri wemaoko akagadzira zvedongo mataira. Isu tinogadzira iro rekutakura bhokisi semasampuli ako kana yako dhizaini zvizere. Madiki madiki ekuyedza anogona kugamuchirwa, yemahara sampuro inowanikwa. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kuUnited States, Europe, India, Japan, Malaysia, Thailand nedzimwe nyika zhinji pasi rose. Kana iwe uine yako dhizaini, ndapota tumira mifananidzo kwatiri, tinogona kuita sampuro kwauri.
Pashure: Ceramic Yakashongedza Matiles Border
Zvadaro: Ruoko Rwakashongedzwa neCeramic Yakashongedza Art Tile
Kushongedza Ceramic Tile
Yakashongedza Ceramic Tile Border
Anoshongedza Ceramic Tile Wall Art
Kushongedza Kwakaitwa Nemaoko Ceramic Tile Clown
Kushongedza Kicheni Ceramic Tile Border